Semalt Expert - Ireo zavatra tokony ho fantatra momba ny hosoka amin'ny aterineto
Ny hosoka amin'ny aterineto dia manondro ny heloka bevava iray, izay namolavolan'ilay mpamono tetikadyny fampiharana paragrafy iray na maromaro miaraka amin'ny tanjon'ny famoahana ny fananan'ny tsirairay na ny singa hafa mahaliana amin'ny alalan'ny hosokafampisehoana olana iray izay marina ary noho izany, manome ny angon-drakitra diso.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fianteherana amin'ny aterineto amin'ny mpanjifa sy ny tompona orinasatoy ny fitaovana hanatsarana ny fifanakalozan-drivotra: mihetsiketsika ny hetsika voarara ampiasain'ny tambajotra iray. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny aterineto dia afakaNy asa mahatsiravina dia sarotra ny mamantatra sy mitory, ary izy ireo dia manan-danja lehibe ho an'ny adiresy.
Jason Adler, manam-pahaizana avy amin'ny Semalt Digital Services, dia nampifanaraka ireo zava-misy mahavariana momba ny hosoka amin'ny aterineto mba hanampiana anao ho vonona amin'ny fanafihana.
Tamin'ny hacking ho an'ny olana malware, dia nanomboka ny heloka bevava ny heloka bevava aterinetomahazo tombony amin'ny fiandohan'ny taona 2000. Amin'ny toe-javatra sasany, ny olana dia heverina ho fitsabahan'ny adiresy ny olana fa tsy nymampitombo ny maha-zava-dehibe ny aterineto amin'ny ezaka atao isan'andro - ego c twist with tank. Ny fifandraisana amin'ny orinasa amin'ny mailaka sy ny fitomboana mihamitombo amin'ny isaNy mpampiasa tranonkala dia nampitombo ny tsatoka ara-bola. Ohatra, ny virosy iray izay nanomboka tamin'ny taona 1999 dia nahatonga fahavoazana miisa $ 80.
Ny hosoka ara-bola dia asa iray izay ahitan'ny mpampihorohoro fampiasam-bolaireo fahafahana na rafitra izay natao hanakorontanana ny tsena amin'ny tanjona amin'ny fanaovana tombombarotra goavana.
Miseho ny fisian'ny hosoka rehefa mahazo ny angon-drakitra ilay mpanafika tsy misy fahalalanatompony ary mampiasa ny angona ho an'ny tombontsoa manokana manokana, tombontsoa ara-bola..
Tamin'ny taona 2001, ny tatitra iray momba ny hosoka amin'ny aterineto nataon'ny IFCC dia naneho fa ny hosoka amin'ny varotra anaty aterineto dia nyny ankamaroan'ny fanitsakitsahana ny fahadisoana noho ny 43 isan-jaton'ny fitarainana. Ankoatra ireo karazana heloka bevava voalaza etsy ambony, hosoka manan-danjafitarainana momba ny hosoka azo atokisana, ny hosoka amin'ny carte de crédit, ary ny entana karama.
Tamin'ny taona 2003, ny tatitra iray avy amin'ny IFCC dia nanamarika fa 50 isan-jaton'ny mpisoloky ny tranonkaladia mponina tany Texas, Kalifornia, Florida, New York ary Illinois. Ny tatitra ihany koa dia mampiseho ny maha-sarotra ny manara-maso ireo nahavanon-dozaireo heloka bevava ireo.
Araka ny filazan'ny sampan-draharaha iray ao Etazonia, ity resaka momba ny hosoka ity dia manaraka iretodia ireo ohatra amin'izao fotoana izao amin'ny hetsika tsy ara-dalàna novonoina tamin'ny alalan'ny tranonkala:
Ny fanodinkodinam-bola sy ny fiarovana an-tsokosoko dia roa no nasehon'i Los Angeles.Tamin'ny tranga voalohany tamin'ny fanodikodinam-barotra an-tsena, ireo mpampahory dia afaka nandoa vola avy amin'ny fivarotana mavitrika izay nitombo avo lenta avy amin'ny $ 8ho $ 15 ao anatin'ny 45 minitra.
Tao anatin'ny toe-javatra iray hafa, maherin'ny 100 ny miaramila miaramila amerikana no niharan'ny fangalarana ny maha-izy azy.Nahazo ny laharam-pahamehana ara-tsosialy sy ny anaran'ireo miaramila miaramila avy amin'ny aterineto ireo nahavanon-doza ary avy eo dia nampiasa izanyny maha-izy azy.
Tamin'ny taona 1999, ny FBI dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fikarohana malaza amin'ny mpamorona irayviriosy amin'ny solosaina izay miankina amin'ny mailaka ho toy ny fantsom-peo hanaparitaka ireo fitaovana amam-panambadiana. Tao anatin'ny andro roa, 19 isan-jaton'ny Etazoniaorinasa sy fitaovana 1.5 tapitrisa no tratran'ity mailaka ity.
Ny hackers koa dia nanangana fanafihana ny rafitra governemanta Amerikana. Ao anatin'ny mpivadynandritra ny taona maro, dia afaka namindra ny solosaina nataon'ny Pentagon sy ny manampahefana hafa ireo mpanafika.